डेंगुको उपचारमा मेवाको पातको रस अमृत समान, यसरि बनाउनुहोस। - Kavre Online
डेंगुको उपचारमा मेवाको पातको रस अमृत समान, यसरि बनाउनुहोस।
अहिले डेंगुको महामरी देशभर नै छ। तीन महिनायता चार हजार बढी मानिस यसबाट प्रभावित भइसकेका छन्। डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो। डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्छ। यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइन्छ।
मेवाकाे पातकाे रसद्वारा उपचार
मेवाको पातको रसको फाइदाकोबारेमा ब्रिटिस मेडिकल जर्नलका विभिन्न जर्नलले प्रमाणित गरिसकेको छ । मेवाको पातको रस डेंगुको उपचारका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ। यसकोे केही मात्रा सेवनले यो रोगमा धेरै फाइदा पुग्छ।
यसले ज्वरोको अवधि घटाएर सेतो रक्तकोषका साथै ‘प्लेटलेट’ बढाउँछ। प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ। डेंगु ज्वरोसँगै एन एस १ अन्टिजिन डाइग्नोसिस भएको दिनबाटै एलोपेथिक औषधिसँगै यसकोे प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। मेवाको पातको रसले मात्र पनि धेरै फाइदा पुग्छ।
यसको मात्रा बच्चालाई ५ देखि १० मिलिलिटर ३ पटक (खाना खानुअघि) दिनुपर्छ। वयस्क व्यक्तिले ३ पटक ३० मिलिलिटरका दरले तीनपटक लिन सक्छन्। रोग लागेर उपचारमा लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हो। डेंगुबाट बच्न यस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ।
377 Post Views
Prevएकाबिहानै चितवनबाट आयो फेरी दुखद खबर !
Nextभगवानको पुजा गर्दा यि कुरा ध्यान दिनुहोस, नत्र अपूर्ण होला
सुगर, युरिक एसिड, मिर्गौलाका समस्या छन् भने अमला यसरि खास्नुहोस निको हुन्छ !
भाले बोकेर सुत्केरी भेट्न पुगे वडाध्यक्ष
१ बर्षअघि डस्टबिनमा भेटिएका बालक यति राम्रा भए, शिशिर परे चकित (भिडियो)
यस्पाली भाइटीकाको शुभ साइत यती बजे हेरेर शेर गर्नुहोस
९० बर्षे हजुरबुवा लट्ठी टेक्दै सहयोग लिएर अर्चनाको डेरामा, आमाको उपचारको लागी पानी बेच्न नपर्ने (हेर्नुस भिडियो)
कश्मिरमा नेपाल घर भएका दुइ गोर्खा सैनि कको नि धन !
सुन चादिको मूल्य लगातार घट्ने क्रम जारी , हेर्नुहोस् आजको कारोबार
छोरीको शरीरको विकास नभएपछि मातापिताले डाक्टरकहाँ… (4,117)
भाइले दिदीको मोबाइल चलाउदा दिदीको यस्तो तस्विरहरु देखेपछि…. (2,096)
कुकुरले लि*ङ्ग खाईदिएपछि बिचरा यी भाईको अबस्थालाई… (1,381)
छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साढे ३ करोड इनाम दिने एक… (765)
रौतहटमा द’र्दनाक घ’टना: दर्जन बढीलाई… (727)
आफ्नो नेपाल भ्रमण बारे चीन पुगेर बोले राष्ट्रपति सी,… (704)
जापानको संसद बैठकमा ३ मिनेट ढिला पुग्दा मन्त्रीले… (678)
गर्दनको कालोपनलाई १५ मिनेटमै गोरो बनाउने सजिलो घरेलु विधि (661)
© Copyright 2016–2019 Kavre Online. All rights reserved.